यो वेबसाइट अनप्लग गर्न समय? अद्यतन 15-05-2019: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
यो वेबसाइट अनप्लग गर्न समय? अद्यतन 15-05-2019
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	13 मई 2019 मा	• 17 टिप्पणिहरु
यो केही कठिन वर्ष थियो र मेरो निजी जीवनमा असर ठूलो थियो। अहिले मलाई मलाई रोक्न वा जारी राख्न निर्णय गर्नु पर्छ। मैले धेरै चोटि पहिले नै बताएको छु कि अनुसन्धान र लेखन राय टुक्राहरू शौक होइन, तर केवल पूर्ण-समय गतिविधि। मसँग पनि छ कसरी वर्णन गरियो मेरो व्यक्तिको विरुद्ध स्मियर अभियानले मेरो नामलाई यस्तो हद सम्म क्षति पु ¥ याएको छ जुन म समाजमा सामान्यतया काम गर्न सक्दैन। यद्यपि सदस्यहरु र दानकर्ताहरूको सानो संख्या सधैं मलाई लागतमा आवरण गर्न सक्षम भएको छ र मैले 'योगदान' गरेको छु र त्यहाँ, यो अब लामो समयसम्म छैन।
मलाई निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ कि सामाजिक मीडिया मा सेंसरशिप पनि एक प्रमुख प्रभाव छ। यो केवल एक तथ्य हो कि धेरै मान्छे अब मेरो लेख उनको टाइमलाइन मा नहीं देख रहे हो। फेसबुकले तपाईंको "रूचिको क्षेत्र" विश्लेषण गर्छ र त्यसपछि निर्णय गर्दछ वा यसलाई देखाउने निर्णय गर्दैन। तथ्याङ्कमा म कसरी हेर्छ कि एक प्रमुख प्रभाव छ। मूलतया यसको अर्थ छ कि तपाइँ अझै पनि के सोच्नु वा सोच्ने कुरालाई अनुमति दिन सकिन्छ, तर त्यो आवाज गुप्त हुन्छ। साथै, तपाईं चीजहरूलाई 'घृणित भाषण' भनिने थप प्रयासहरू देख्नुहुन्छ र तपाइँ सबै टोलमा सक्रिय टुरल सेनाहरू देख्नुहुन्छ जुन ती सबै कुरालाई सजिलै रिसार्दै गर्छु जुन म विच्छेद र झूटा आधारभूत संस्थाहरूसँग भरी चर्चामा लेख्छु (उदाहरणको लागि एक लेखबाट एक टुक्रा प्रयोग गरेर सन्दर्भबाट बाहिरिएको छ)। तैपनि म अझै पनि एक हजार 20 र 30 बीचको दिनमा एक दिनको भ्रमण गर्दछ।
मलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ कि अधिकांश मानिसहरू मात्र हेरविचार गर्दैन किनकि मिडियाले कसरी अधिकतमिम बनाउँछ समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान नयाँ कानून को माध्यम ले धक्का (हेर्नुहोस voorbeeld)। त्यसोभए म किन यी समस्याहरु लाई बढाने र ध्यान मा ल्याउन को समस्या मा जाऊँगा? वास्तवमा कुनै पनि केहि मा चासो छैन र यदि के गरिरहेको छ भन्ने बारेमा जागरूकता छ भने, मानिसहरु मूत, आफ्नो हात धोएर र दैनिक चिन्ता संग जारी राख्छन्।
कसैलाई, तर वास्तवमा कसैले पनि काम गर्दैन। निस्सन्देही त्यहाँ केही मानिसहरू छन् जसले सोच्न उपयोगी छ कि एक पीला बनियान पहने भएका नियन्त्रण विरोधी बकवासमा भाग लिनका लागी उपयोगी छ, तर हामी त्यस संसारमा परिवर्तन गर्न जाँदैछौँ। अरूले यहाँ केहि दसौं आध्यात्मिक रूपमा उत्तेजित व्याख्यानको लागि वा ध्यान सत्रमा भाग लिन सक्दछ, तर केवल केहि मात्र नभएसम्म जीवनको व्यावहारिक व्याख्यामा हेलो खोल्नको लागी कुनै पनि समय लाग्न सक्छ। केवल एक चोटि एक पटक मात्र मैले प्रतिक्रियाबाट प्राप्त गर्ने काम प्राप्त गर्दछु जसले आफ्नो काम छोड्ने प्रणाली छोड्न मद्दत गर्दछ। केवल एक पटक वा दुई पटक तपाईं मान्छेहरू सुन्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, मतदान गर्न हिंडेको छ।
यदि तपाइँ पाठक फेला पार्नुहुन्छ कि यो उपयोगी र आवश्यक छ जारी राख्न; यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि पाठकहरूको लागि महत्त्वपूर्ण टुक्रा लेख्न महत्त्वपूर्ण छ; कागजातहरूसँग मैले मञ्च र राजनीतिको जाँच जारी राखें, त्यसपछि यो समय हो कि तपाईं त्यो ठोस प्रशंसामा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। म अब गरीबीको स्थितिमा रहन सक्दिन र सबै खर्चहरू पूरा गर्न सक्दिन। यो समय तपाईं एक सदस्यता मा व्यक्त गर्न को लागि समय हो, किनकि तपाईं सजिलै संग डे Telegraaf, Netflix, एक स्पोर्ट्स च्यानल वा अन्य मिडिया को एक सदस्य हुन सक्छ। म तपाईलाई सोध्दछु: तपाई के बढि मूल्यवान हुनुहुन्छ? दुर्भाग्यवश, यदि सदस्यहरूको संख्या वर्तमान स्तरमा रहन्छ भने, म अब जारी राख्न सक्दैन। लक्ष्य कम्तिमा 500 आधारभूत सदस्यहरू वा अन्य सदस्यतामा यसको बराबर छ। दिनभरि ती हजारौं पाठकहरू, तपाईं सफल हुनु पर्छ।
यसैले यो तपाईलाई एक तुरुन्त कल छ। एक हप्तामा म निर्णय गर्नेछु कि म सम्पूर्ण अभिलेखमा अफलाइन संग्रह सहित वा जारी राख्छ कि छैन। आशा तपाईंमा सेट गरिएको छ। तपाईंको प्रशंसाको लागि अग्रिम धन्यवाद!
15-05-2019 अपडेट गर्नुहोस्
आजको समर्थनको लागि मलाई अद्भुत प्रस्ताव छ। त्यो सबैलाई अझै पनि महसुस गर्न आवश्यक छ, तर यसले मलाई उत्साहजनक तथ्यलाई बदल्दैन। समयका लागि केही सदस्यहरू थपिएका छन् (यसको लागि धन्यवाद), जुन वास्तवमा आश्चर्यजनक छ कि ठूलो मात्रामा (प्रति दिन दसैं हजार पाठकहरू), तर सबै मा, म निश्चित रूपमा जारी राख्न चाहन्छु। त्यो समर्थनको लागि धन्यवाद। चाँडै प्रतिज्ञा गरिएको मद्दतलाई एहसास हुने छ, म यसको बारेमा थप भन्न चाहन्छु। समयको लागि म आशामा जारी रहनेछु कि सबै चीजहरू ठीक हुनेछन् र म लामो समयसम्म लेख्न जारी राख्न सक्छु। बीचमा, सामेल हुन जारी राख्नुहोस्, किनभने तपाईंको समर्थन आवश्यक छ। यो राम्रो भएन कि यदि एक स्वतन्त्र माध्यमले केवल ठूलो प्रचार अभियान सफल गर्न को लागी केवल सदस्यहरू भर्न सक्दछ भने, के तिमी सोच्दैनौ?
कसरी परिष्कृत विरोधको खेल परिष्कृत छ?
ट्याग: विशेष गरी, मार्टिन, अफलाइन, प्लग, नि: शुल्क देश, वेबसाइट
जोर्ड जेंटेवलड लेखे:
13 मई 2019 मा 15: 06
सम्भवतः यो तपाईंको विचारले 10 सेन्टको भुक्तानीको लागि गैर-सदस्यहरूलाई मात्र दृश्यात्मक बनाउन एक विचार हो। यसले तपाईंलाई अधिक आय दिन्छ, र जो व्यक्ति सदस्य हुन चाहँदैनन् आफैले निर्णय गर्न सक्दछ जुन कुन वस्तुका लागि उनीहरूको लागि 10 सेन्ट छन्।
13 मई 2019 मा 22: 33
मेरो विचारमा यो केवल भुक्तानीको बारेमा मात्र होइन, तर यो प्रयासको बारेमा व्यक्तिलाई भुक्तानको लागी पनि छ।
13 मई 2019 मा 23: 20
तपाईलाई के मतलब छ?
14 मई 2019 मा 08: 04
अधिकांश मानिसहरू पूर्णतया प्रणाली द्वारा बाँचेका छन्। यहां सम्म कि जागरण प्रक्रिया मा मान्छे अझै पनि प्रणाली द्वारा रह रहे हो। यदि तपाईं बिल तिर्न चाहानुहुन्छ वा प्रणालीमा सेवाको लागि भुक्तान गर्न बिर्सनु हुन्न (कर प्राधिकारीहरू सहित), त्यसपछि तपाइँ सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न वा तपाइँले पनि भ्रमण गर्न पछाडि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न ... यसको सबै परिणामहरूसँग। मानिसहरू यो प्रयोगमा छन् र आश्रित व्यक्तिहरूको आफ्नै बानीको लागि बस्तीको ढाँचा।
इन्टरनेटको प्रयोग गर्दा, मार्टिन व्रिजल्याण्ड (कहिलेकाहीं धेरै) वेबसाईटहरु मध्ये एक हो जुन तिनीहरू भ्रमण गर्छन् र जसको लागि कुनै भुक्तानी आवश्यक छैन। सेवा प्रदान गरिएको छ र मान्छे तिनीहरूलाई प्रणालीको आशाको रूपमा व्यवहार गर्न जारी राख्छन्। यदि भुक्तान गरिनु पर्छ भने, तिनीहरू सजिलै अर्को वेबसाइटमा चल्दो लागि जान्छन्। केहि रकम हस्तान्तरण गर्न यो धेरै समस्या हो। मलाई लाग्छ कि यी धेरै व्यक्तिहरू (केही प्रतिशत पहिले नै धेरै छन्) मात्र आफ्नो थैला खोल्नुहोस् र यदि तपाईंलाई व्यक्तिमा भेट्नुभयो भने तपाईले यूरो वा बढी दिनुहुनेछ।
13 मई 2019 मा 15: 13
दुर्भाग्यवश, हामीसँग अब कोही कोही पनि नीदरल्याण्डमा तपाईले यस्तो कुनै पनि विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। यो विचार हो कि धेरैले 100% मा विश्वास गर्दैनन् र तपाईले के लेख्नुहुन्छ भनेर बुझ्दछन्, मुख्यतया मिडियाको एनएलपी प्रविधिको सम्मोहन प्रभावको कारण। त्यो साहसी भरोसा आवाज देखि, उदाहरणका लागि, RTL समाचार यति राम्रो गर्दैछ।
प्रत्येक पटक तपाईले कल गर्नुहोला र केहि थप थपिन्छन्, तर पर्याप्त छैन। तर तिनीहरू आफ्नो विचारहरू छोड्न र तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ वा तिनीहरूलाई हास्यास्पद बनाउन। फुटबल वा डी टेलीग्राफ, कुनै शैली, निबुरु, GTST आदि, जुन साँच्चै उनी भावनात्मक बनाउँछ, जो धेरैका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, उनीहरूलाई तुरुन्तै यो बिना विश्वास मा विश्वास गर्छन्।
उनीहरूले नयाँ पुलिस संसारलाई बेवास्ता गर्छन् र अनुकरण गर्छन्। यसैले प्रवर्तन अधिकारीहरू, प्रहरी र बैलिफ कार्यक्रमहरूको रूपमा यस्तो कार्यक्रमहरू यस्तो राम्रो गर्दै छन्। तिनीहरू केवल नियन्त्रण र गलत सुरक्षा चाहन्छन्। साँच्चै ट्र्युन्सहोउ तपाईंको सँगी मानिसलाई धोका दिने र निरन्तर अपराधीको रूपमा आँखा राख्ने। त्यो मजा लिइरहेछ।
यो शर्मिला छ कि यो आउछ। केहि खुशी हुनेछ कि त्यो परेशान त्यो डरावना ईडविज्ञान संग परिवर्तित जस्तै यो रोक्न हुनेछ, तपाईं टोग्नुहुन्छ।
13 मई 2019 मा 16: 49
यससँग म मेरो योगदान बढ्छु, तर यो पर्याप्त छैन।
मैले तपाईलाई आफ्नो वेबसाइटमा तल राखेको कुरामा नियमित रूपमा मेरो आँखालाई रगत दिन्छु।
म अन्य मानिसको आँखाले पनि पढ्न र मार्टिन बस पागल छ।
हे मार्टिन, तिमी पागल हो, तर म तिमीलाई माया गर्छु।
त्यसकारण यहाँ सहयोगीहरूलाई कल गर्नुहोस्, पागल छ र सदस्य हुनुहोस्, यो गाह्रो छैन।
13 मई 2019 मा 17: 24
मानिसहरू केवल जनावरहरूको भेडा हुन्, तिनीहरूले "बोसो कारण" को लागि संग्रह बक्स मा एक यूरो राखेर गिरोइन 555 मा पैसा स्थानान्तरण गर्छन्।
संज्ञानात्मक विचलन संग पनि गर्नु पर्छ, अन्यथा म यसलाई व्याख्या गर्न सक्दैन।
म यसको बारेमा धेरै भन्न सक्दैन, यो दु: खी अवलोकन हो।
तपाईंले पहिले यो स्थिति स्पष्ट गर्नुभएको छ, जाहिरा तरिकाले यो मान्छे चासो छैन।
तपाईंले छोड्नु भएको एकमात्र विकल्प तपाईंको सबै वस्तुहरूको पछि भुक्तानी पर्खाल राख्न चाहन्छ, मानिसहरू मात्र तिर्नु पर्दछ यदि तिनीहरू फर्किनमा केहि छन् तर प्रशंसाको बाहिर होइनन्।
13 मई 2019 मा 22: 28
म एक सदस्य बनने प्रयास गर्छु तर यसले काम गर्दैन। यदि मैले भुक्तानी जानकारी प्रदान गरेको छु भने, म एउटा त्रुटि सन्देश प्राप्त गर्दछु। के तपाईंसँग फरक तरिका छ जसमा म सदस्य हुन सक्छु?
के अरूसँग यो समस्या छ?
13 मई 2019 मा 23: 19
यदि मैले सोध्न सक्छु भने त्रुटि सन्देश के हो?
14 मई 2019 मा 15: 20
हो, भुक्तान सिर्जना असफल भयो किनकि भुक्तानी भुक्तानी प्रदायकमा पुन: निर्देशित गरिएको थियो। भुक्तान जानकारी: एक आवर्ती प्रकार को लागि एक ग्राहक आवश्यक छ।
मैले आइडील मार्फत सदस्यता लिन खोजे।
14 मई 2019 मा 18: 06
त्यसपछि तपाईले आईडील मार्फत प्रत्यक्ष डेबिट विकल्प रोज्नु हुन्छ र तपाईंको बैंक चयन गर्नुपर्छ
14 मई 2019 मा 09: 06
गत महिना आधारको रूपमा दर्ता गरिएको, अब खरिदकर्तालाई अपग्रेड गरियो! कृपया बस्नुहोस्! मान्छे यो आवश्यक छ र यदि तपाइँ एक विषय बेवास्ता गर्नुहुन्छ भने यो उज्ज्वल छ र त्यसपछि एउटा बिल त्यसपछि समाचार प्रतिवेदनहरू (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा) द्वारा पेश गरिएको छ ... र त्यसपछि मेरो वरपर सबै ती व्यक्ति जसले अन्धासाथ यो विश्वास गर्दछ ... ..
लिंडी हेजमान्स लेखे:
14 मई 2019 मा 09: 59
मैले भर्खरै डेबिट मार्फत मेरो सदस्यता लिएको छु। मैले पछिल्लो वर्ष पनि गरेको थियो, एक पटक प्रत्यक्ष डेबिटको लागि डेबिट गरियो र केहि समय अघि भेटिएको थियो कि पछि कहिल्यै प्रत्यक्ष डेबिट छैन .... म अहिले राम्रो कुरामा नजर राख्छु। म तपाईंका लेखहरू पढ्न चाहन्छु, सबै कुरासँग केहि गर्न सक्दैन, तर तपाईं लेख जारी राख्न चाहन्छु। जब मैले अझै फेसबुकमा नियमित रूपमा तपाईंको लेख साझेदारी गरेँ, पढ्ने कुनै टर्डर यो पढेर ... धेरै खराब छ। त्यसैले अगाडि जानुहोस्, तपाईसँग मेरो समर्थन छ!
14 मई 2019 मा 12: 00
र त्यो वास्तवमा मलाई के भयो, स्वचालित रूपमा संग्रह 1 समयका लागि डेबिट गरिएको थियो, तर म कम्तिमा छ महिनाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। म यो पनि राम्रो नजर राख्छु।
केही हप्ता अघि मैले तामाङमा सानो अपग्रेड गरे। म साँच्चै तपाईंको लेखन मार्टिनको प्रशंसा गर्दछु!
र फेरि मात्र सदस्यहरूको एक सानो संख्या थपिएको छ, किन कुनै टुक्रा वा केहि 100 होइन?
केवल €2प्रति महिनाको लागि तपाईं एक सदस्य हुन सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं खाना बैंकमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं अझै पनि यो छुटाउन सक्नुहुनेछ, वा यो धेरै खर्च गर्दछ कि यसले तपाईंको वालेटमा मर्नेछ?
14 मई 2019 मा 17: 05
पछिल्लो खबर ###
(यो टिप्पणी सुन्नुहोस्: टेलिग्राफफ साक्षात्कार 1ste लिंकमा Grapperhaus) राम्रो विश्वास मा पत्रकारहरु (पीआर डी V र जेड एच एच) सबै भन्दा महंगी कारहरु र मार्टिन Vrijland जो तथ्याङ्क र राम्रो संग स्थापित विश्लेषण संग ड्राइव पनि केहि हज़ार यूरो छैनन् सात वर्षको लागि आफ्नो प्रतिबद्धताको लागि एक महिना जम्मा गर्न सक्छ ..
यदि यो 1 को योग्य छ भने, यो यो वेबसाइट हो र विशेष रूप देखि तल लिंक मा Gra Graerhaus निर्भर गर्दछ, पढने छ कि हामी ईमानदार विश्लेषकहरु लाई अधिक उदारतापूर्वक दिन को माध्यम ले जो अन्यथा जाँच नगर्ने
कृपया मार्टिनभ्रिजल्याण्डद्वारा चित्रण गरिएको टेलीग्राफ भवन र परिदृश्यमा नक्कली आक्रमणहरू
15 मई 2019 मा 09: 25
पेपल को माध्यम ले एक-पटक दान।
यदि तपाईसँग पहिल्यै खाता छ भने धेरै सानो प्रयास छ, त्यसैले कुनै समस्या छैन।
म तपाईंका लेखहरूबाट धेरै कुरा सिक्दछु, तपाईले मलाई फरक दृष्टिकोणबाट चीजहरू हेर्नु हुन्छ र तपाईंको मनपर्ने विश्लेषणहरू छन्। म भविष्यको बारेमा धेरै चिन्ता पनि साझा गर्दछु।
सेतो खरायो लेखे:
15 मई 2019 मा 22: 51
मेरो लागि एक खरीददार हुन पनि यो धेरै गाह्रो थियो, तर अन्त्यमा सफल भयो।
« अवलोकन हिरासतका लागि थियम्स एच, एडिथ शिपरको बिल पछि, अघिल्लो सरकारमा खारेज गरिएको छ, सबैलाई स्वीकार गरिनेछ।
क्या स्क्रिप्ट लेखकहरु संग मीडिया काम गर्दछ र उनि PsyOp अपरेशन को बेचते हो किनकी उनि टीवी शो संग गर्छन? »
कुल भ्रमण: 12.459.701